I-Red Hat I-Sign Single On (SSO) Isebenza kwi-Red Hat i-Virtualization | IYO
I-Red Hat iyaziwa ngokuba yi-Red Hat Enterprise Linux (RHEL) kunye nokuba nguvulindlela ekuqhubeni imisebenzi yokuphucula umthombo ovulekile. Ngexesha elininzi, uqoqosho oluphezulu luya kuba yi-Red Hat izinto ezinikezela ngokuzisebenzisayo kwenye indawo kwi-stack.
I-Red Hat Isayinini esisodwa (SSO) ukunika isakhelo esilungileyo kunye nesininzi esifanelekileyo sokuqinisekisa izakhiwo zewebhu. Izicelo, ezifana ne-Red Hat SSO, zingahanjiswa ngokucacileyo kwi-stort of stages. I-Red Hat Ikhethele ukufumanisa ifu eliqingatha nesiqingatha ukuthumela umzekelo we-Red Hat SSO, njengengxenye enkulu yomsebenzi oqhelekileyo https://sso.redhat.com ichitshiyelwa kwenye yeziko lethu lolwazi lenkampani. I-SSO kunye nesinye isinye esinye isicelo siyaqhubeka siphuma phezulu kwi-Red Hat Virtualalization.
Ibali lethu ngamalungiselelo okudalwa phezulu kwe-Red Hat Virtualalization ibuyele phakathi kwe-2010 xa i-Red Hat IT ibanjwe ngokupheleleyo i-Red Hat Virtualization ngelixa ikhona kwiifomu ze-alpha zangaphambili. I-Red Hat Virtualization iye yavelisa ngokucacileyo into eninzi ukusuka kuloo ndawo phambili, kodwa entliziyweni yayo, kuseyinto enamandla yamatye e-KVM yokwenza ubuchule obutsha.
Njengamanyathelo amaninzi, i-Red Hat isebenza ngamaziko ambalwa eenkcukacha ezifunyenweyo. Le mibutho iphuma kwi-5-10 kwii-racks ukuya kwinani elikhulu leenyawo zenyawo. Kwiziko ngalinye, asisebenzi ngaphantsi kweBlack Hat Virtualization bunch (iCandelo leNgcaciso kwiNtetho ye-Red Hat eyiNtetho). Oku kubandakanya i-RHEL hypervisors kunye neqoqo lomsebenzi. Idatha eyongezelelweyo ekuthumeni kwethu inokufumaneka kwisango lomthengi. Kuyacaca ukuba, amaninzi ahlukeneyo ashintshile njengokuba ngoku siqhuba ukuxuba kwi-Red Hat Virtualization 3.6 kunye ne-Red Hat Virtualization 4.0.
Kwiindawo zethu zokubaluleka eziphambili, sinamaziko e-Red Hat Virtualization data kunye nee-hubs zokulawula. Le ndlela isebenzise imifanekiso yamanani kunye namacandelo okusebenza. Yonke into inamacandelo afikeleleke ngokubanzi phakathi kwababini kunye ne-balancer ye-heap ejongene nokunyakaza kwintlangano enamandla / enamandla okanye enamandla, ngokuhambisana nesicelo. Ngenxa ye-Red Hat i-SSO, i-database ye-MariaDB ibalulekile ebomini kwicala elinye kunye nemiphefumlo yokumisa eshushu ngokubhekiselele. Sisebenzelana nokutshintshwa kwesi sikhokelo esishukumisayo / esinamandla esisebenzisa iGalera. Ii-hubs ze-Red Hat SSO zangempela zihanjiswa ziguquguqukayo, zinezibini ezimbini kwiziko leData yeVictualization data. Umthwalo umthwalo ulungiswe phakathi kwazo zonke ii-hub ze-RH SSO kwaye zigcina iseshoni yeseshoni esebenzisa ubunzima be-infinist.
I-Movement ezayo kwi-https: //sso.redhat.com ichitshiyelwa yi-CDN kwaye ekugqibeleni igqitywa yi-application hubs ezenziwe kwi-Red Hat Virtualalization okanye ngamaqoqo e-RH SSO esinawo kwi-AWS. Ngokuqhelekileyo, umsebenzi ukhishwa kumaziko ethu eenkcukacha njengalezo zixhobo zihamba kakuhle kakhulu. Sifumene ukuba i-Red Hat Virtualization VMs isebenza ngokubanzi ngokwezinga elilinganayo nezikhokelo zetsimbi ezibonakalayo.
Izibonelelo zeRed Hat I-Sign Single kwi-Virtualization
Iintlobo ze-Red Hat Virtualization ze-RH SSO ezigqithiseleyo ngokugqithiseleyo kwe-VM kuphela. Singakwazi ukulungiswa ngokukhawuleza kunye nokucima i-VMs ngenxa ye-Red Hat Virtualization Command Line Interface (CLI) kunye ne-API. Enyanisweni, kwinqanaba elidlulileyo, ndiyakwazi ukuzakhela iindawo ezilinganayo kwiindawo ezilinganayo ngosuku ngenxa ye "isangqa", i-Red Hat Virtualalization CLI kwaye izicelo zethu zixhotywe ngokupheleleyo.
Ukuvakala nokusebenza kwe-KVM intsha, idibaniswe kunye nokusetyenziswa kolawulo kunye nokukhuselwa kwe-Red Hat Virtualization imvume yokuhlukana kwe-IT, umzekelo, i-Red Hat IT, ukuqonda isiqinisekiso sokuthunyelwa ngokukhawuleza kunye neziseko ngenkqu kusetyenziswa izixhobo zokusebenza ezikhoyo. Ukongeza, i-https: //sso.redhat.com inempembelelo enkulu kunye novulo oluvulekileyo lweHat Hat, kubonisa ukuzinikezela kwe-Red hat ukuvula umthombo wokuvelisa izinto ezintsha:
Red Hat Virtualalization
I-Platform ye-Red Hat JBoss Enterprise